Dumarku waxay sheegeen in aysan raggu waxba ka aqoon kintirka | Raganimo University
Dumarku waxay sheegeen in aysan raggu waxba ka aqoon kintirka
February 4, 20192 minutes
Xagee ku yaalaa kintirku? Waa su'aal raggu ay u maleeyaan in ay yaqaanaan jawaabteeda, balse dumar badan ayaa sheegay in aysan raggu aqoon halka uu ku yaalo kintirku. Iyadoo qaar badan ay ku lumaan bushimaha siilka iyagoo baadi goobaya kintirka. Sidoo kale raggu ma yaqaanaan muhiimada dhabta ah ee uu kintirku u leeyahay galmada.
Kintirka ayaa ah xubinta ugu muhiimsan ee abuurta dareenka galmada dumarka. Dumarka qaar kintirkooda waa fududay in la helo oo waa soo baxsanyahay halka kuwa kale uu qarsoonyahay oo ay ku daboolanyihiin bushimaha oo ninka haddii uusan si fiican baaritaan ugu sameyn laga yaabo in uu ka habaabo. Haddii aad tahay nin geesi ah oo gacalisadiisa u leefa, waxaad ku ogaanaysaa in aad heshay kintirka dareenka iyo sawaxanka ay sameyso ama haddii uu wada hadal furan idinka dhexeeya iyada ayaa waydiin kartaa in ay ku hagto.
Marka dumarka loo leefayo, kintirka ayaa ah meesha ugu raaxada badan ee dumarku ku bixiyo bixi karaan leefidiisa.
Kintirka ayaa ah xubin aad u jilicsan, iyadoo dumarku ay sheegeen in ragg badan ay sameeyaan qalad weyn oo ah in farahooda ay xoog ugu salaaxaan ama ku riixaan, taasoo xanuun badan ku dhalin karta gabadha. Taxadar ayaa laga doonayaa ragga marka ay taabanayaan kintirka.
Sidoo kale fikrada ugu weyn ee qaladka ay raggu ka aaminsan yihiin ayaa ah nin uu yahay inta yar ee soo muuqata. Kintirku ma ahan oo keliya inta muuqata ee kor saaran, ee dhaqaatiirtu waxay ogaadeen in qaybta ugu weyn ay ku jirto gudaha jirka oo mararka qaar uu xitaa dhirir le'egyahay guska balse uusan soo baxsanayn. Sidaa daraadeed ayaa dumarka la guday ee laga jaray inta kor saaran ay wali u kacsadaan.